पाकिस्तानमा संयुक्त अरब अमीरातका लागि रोजगारहरू 🥇 【हामी दुबई र अबू धाबीमा भर्ती गर्दैछौं!】
दुबईमा रोजगारहरू दुबई र अबु धाबीमा भर्तीहरू उपलब्ध छन् - दुबई र अबु धाबीमा रोजगारहरू उपलब्ध छन्!
दुबईमा प्रवासीहरूको लागि सरकारी क्यारियर
पाकिस्तानका लागि संयुक्त अरब अमीरातका लागि रोजगारी
दुबईमा उत्कृष्ट भर्ती कम्पनीको साथ सुरू गर्नुहोस्
पाकिस्तानका लागि संयुक्त अरब अमीरातका लागि रोजगारी हाम्रो कम्पनी फरक छ। हामी धेरै छौं युएईमा अन्य गाईड कम्पनीहरू भन्दा राम्रो। यसबाहेक, हाम्रो कम्पनीले 2016 मा स्थापना गरी युनाइटेड अरब इमिरेट्समा आश्चर्यजनक सेवाहरू स्थापना गर्यो। हाम्रो भर्ती कम्पनी कर्मचारी अनुभवी भर्ती सल्लाहकार दुबई मा र सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन जीसीसी देशहरूमा पेशेवरहरू.
दुबई शहर कम्पनी एक हो मध्य पूर्वमा दुबै एजेन्सी सब भन्दा छिटो बढिरहेको छ, एशिया र क्यानाडा। यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ, केहि एशियाई रोजगार खोज्नेहरू युएईमा हाम्रो कम्पनी प्रयोग गर्दैछ। 80% क्यारियर शिकारी भन्दा बढी दुबईमा एक सफल उम्मेद्वार बन्नुहोस्.
एशिया रिक्रुटको स्थापना प्रतिस्पर्धी बजारको मागसँग मिल्दो छ। दुबई कम्पनी असंख्य प्रतिष्ठित ग्राहकहरूलाई स्टाफ समाधान प्रदान गर्दै। र धेरै उम्मेदवारहरूलाई क्यारियर र बृद्धि गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दै। हाम्रो कम्पनी सामान्यतया बोल्दछ को को विशेष समूह को एक हिस्सा हो दुबईमा कम्पनीहरू शहर। यी बुँदाहरू दिइए, मध्य पूर्व र एशिया भर्ती व्यवसायहरू संयुक्त अरब अमीरातमा अज्ञात परियोजनाहरू व्यवस्थित गरियो। दुबई र अबू धाबीमा रचनात्मक खोजी गर्ने धेरै क्यारियरलाई रचनात्मक रुपमा मद्दत गर्दछ।
त्यसैले हाम्रो क्यारियर खोजी सेवाहरू विशेष गरी डिजाइन गरिएका छन्। बस गर्न दुबईको लागि भारतीय खोज मा नौकरीमा सहयोग प्रदान गर्नुहोस्। ती परिस्थितिहरूमा, हाम्रो कम्पनीले एक अद्वितीय प्रदान गर्दछ क्यारियर र दुबईका कम्पनीहरू। मध्यपूर्वमा पाकिस्तानका नौकरी चाहनेहरूको लागि संयुक्त अरब अमीरातमा प्रतिभाशाली क्यारियर शिकारीहरूको लागि अवसर।
दुबईका लागि फेरि पुनः अपलोड गर्नुहोस्!
अफगानिस्तान दुबईका लागि अफगानिस्तान!
हामी तपाईंको अद्यावधिक गरिएको CV को पर्खिरहेका छौं
दुबई उत्कृष्ट र अचम्म छ!
अधिकांश भाग को लागि, दुबई सिटी कम्पनी भर्ती कम्पनी। कैरियर चाहनेहरू मात्र होइन को लागी सेवा गरिरहेका छन दुबई स्थानीय मोटर वाहन कार्यहरू। तर जस्तो कि हामी भर्ती गर्दै छौं भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय जागिर खोज्ने जसमा एशियाई रोजगार खोज्नेहरू सामेल छन्। पाकिस्तानी रोजगार खोज्नेहरू हुन् युएईमा स्वागत छ र हामी हो निश्चित रूपमा युएईमा मात्र सीमित छैन। उही समयमा, हामी कतार, चीनबाट उम्मेदवार खोज्दैछौं र नतिजामा ह Hongक Kongका कार्यकारी पनि। साथै दक्षिण अफ्रिकाका नौकरी खोजकर्ताहरू। संयुक्त राज्य अमेरिका र सिंगापुरको साथ। थप रूपमा, हामी इन्डोनेसियाबाट विदेशीहरू सहयोग गरिरहेका छौं। र मलेसिया नौकरी को शिकार दुबई मा स्वागत देखि अधिक हो.
दुबई वीजा संग काम गर्दछ स्थानीय उम्मेद्वारहरूको लागि मात्र उपलब्ध छैन। यदी तिमी पाकिस्तानबाट तपाईं दुबई सिटी कम्पनीबाट नौकरी प्रस्ताव पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दुबई मा काम को खोज को उद्देश्य को लागी। हाम्रो टोली संयुक्त अरब एमिरेट्समा उम्मेदवारहरूको खोजी गर्दैछ। र दुबई शहर कम्पनीहरूमा पाकिस्तान कामदार राख्ने। यसलाई ध्यानमा राख्दै हामी अगाडि हेर्दै छौं दुबईमा नयाँ अवसरहरूको लागि तपाईंलाई राख्दै.
दुबई एक अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियर को लागी सबै भन्दा राम्रो स्थान हो। दुबईमा बेरोजगारी दर एकदम कम छ। त्यसोभए तपाइँले हाम्रो सेवा प्रयोग गर्न र पाकिस्तानबाट स्थानान्तरण गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। जब तपाईं हाम्रो साथ आवेदन कम्पनीले सजिलै मध्य पूर्वमा एक नौकरी प्राप्त गर्न सक्दछ। एचआर प्रबन्धक र भर्तीकर्ता अधिकारीहरूसँगको जडान क्षेत्र रोजगार खोज्नको लागि महत्वपूर्ण छ। त्यसैले आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् र आज पुनःसुरु गर्नुहोस्.
हामी संयुक्त अरब अमीरात मा सबै भन्दा तेज विकास कम्पनी हो
तथ्यको रूपमा, हामी युएईमा सबै भन्दा राम्रो कम्पनी हौं। हामी पनि छौं दुबईमा पूर्ण इजाजत पत्र भर्ती एजेन्सी हाम्रो टोलीसँग युएईमा विशेष अनुभव छ। क्यारियर खोज्नेहरू पाकिस्तानबाट Gulf Jobs। विशेष रोजगार खोज अनुमोदनका साथ पाकिस्तानका मानिसहरू युएईमा रोजगार खोजीको लागि आउँदछन्। यसलाई ध्यानमा राख्दै, हाम्रो कम्पनीले जनशक्ति निर्यात गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। पाकिस्तानबाट विदेशमा दुबईमा एक्सट्याट्सका लागि गाईडहरू.
अर्को तरिका राख्नु, दुबई सिटी कम्पनी भर्ती सेवा। दायरा प्रदान गर्दछ रोजगारीले पाकिस्तानबाट जागिर खोज्न मद्दत गर्दछ। हामी दुबई र अबु धाबीमा 6,000 HR कम्पनीहरूसँग काम गर्दैछौं। दुबईमा स्थायी प्लेसमेन्ट सेवाहरूको लागि। हाम्रो महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण क्यारियर प्लेसमेन्ट संविदा कर्मचारी शामिल छन्। दुबई र अबु धाबीमा स्थानीय कम्पनीहरूको लागि अस्थायी स्टाफको साथ। थप रूपमा, हामी एक मा काम गर्दै छौं अन्तर्राष्ट्रिय भर्ती uber र ट्याक्सी बजार.
उही टोकन सेवाहरु द्वारा हाम्रो कम्पनी द्वारा प्रदान गरीएको। रing्ग गर्दै सानो एसियाबाट एमिरेट्स कम्पनीहरू सम्म। जीसीसी देशहरूमा ठूला बहुराष्ट्रिय संगठनहरू सम्म। जस्तै आश्चर्यजनक कतारको साथ बहराइन। हाम्रो दुबई कम्पनीहरु विभिन्न उद्योगहरुको लागि भर्ती गर्दै छन्। दुबई र अबू धाबी मा तेल र ग्याँस जस्तै। त्यसैले पाकिस्तानीका लागि अफगानिस्तानमा अफगानिस्तान तपाईंको हातमा हुन सक्छ।
यद्यपि यो अबू धाबीमा साँचो जानकारी टेक्नोलोजी कार्य हुन सक्छ। पाकिस्तानको संयुक्त अरब अमीरातको लागि सुपर छ विदेशी क्यारियर शिकारीहरुको लागि लोकप्रिय। अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको लागि बैंकि & र वित्त क्यारियर। साथै, वरिष्ठ अधिकारीहरू युएईमा पनि उपलब्ध छन्। एउटै समयमा, दुबईमा स्वास्थ्य सेवा रोजगार अवसरहरू भेट्टाउन गाह्रो छ। तर यो अझै पनी सम्भव छ यदि सहि काम खोज धेरै लामो छ। आधारभूत अवसरहरू निर्माणको उल्लेख नगरी। सँगसँगै निर्माण र अमीरातमा रसद र यातायात क्यारियर.
पाकिस्तान बाट उम्मेदवारहरु को लागी सब भन्दा सम्मोहक प्रमाण। त्यो पत्ता लगाउन सजिलो कल सेन्टर अवसरहरू हुन्। तपाईं उदाहरण को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ दुबई व्हाट्सएप समूह। त्यहाँ धेरै स्थानहरू छन् जहाँ पाकिस्तान कामदार दुबईमा राख्न सकिन्छ।
नकारात्मक पक्ष मा सम्झनु पर्छ। धेरै दुबईको सपना हेर्दै धेरै उम्मेदवारहरू। यी दिनहरू ईन्जिनियरि ofको क्षेत्रमा अधिक विशेषज्ञताको साथ इमिरेट्सको लागि यात्रा गर्दै। सूचना प्रविधि (IT) दुबईमा अफगानिस्तानका लागि रोजगारी यदि तपाईं हाम्रो कम्पनीको साथ साइन अप गर्नुहुन्छ भने उपलब्ध छन्। यो सकारात्मक पक्ष मा दिमागमा संग। तिमी सक्छौ बिक्री र मार्केटिंग को लागी एक धेरै राम्रो अवसर प्राप्त गर्नुहोस् ग्राहक सेवा स्थिति। वित्त र लेखा सँगै एमिरेट्समा बैंक एचआर र प्रशासन क्यारियरको साथ। यस्तै तरीकाले, यदि तपाइँ पाकिस्तानको रोजगार खोजीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाइँ शीर्ष प्रबंधन र कर्पोरेट रणनीति।
जडानको लागि विस्तृत नेटवर्किंग क्षमताहरूको साथ। पाकिस्तानका रोजगारी खोज्नेहरुलाई दुबई कम्पनीहरू। एक चीजको लागि, हाम्रो साथ संयुक्त मध्य पूर्व बजार मा व्यावसायिक अनुभव। अर्कोतर्फ, हामीले युएईमा पाकिस्तानी अधिकारीहरू राखेका छौं। हाम्रो धेरै अनुभवी सल्लाहकारहरूको लागि खोजी गर्दै अफगानिस्तान दुबईका लागि पाकिस्तानi. दुबईमा अनलाइन रोजगारहरू भेट्टाउन सजिलो छैन। यदि तपाईं विदेशमा बस्नुहुन्छ। तर अर्को मुख्य बुँदा जुन हामी एशियाली क्यारियर शिकारीहरूका लागि गर्न प्रतिबद्ध छौं। केवल प्रदान गर्दै छ रोजगार खोजी सेवाहरूको उच्च स्तर मानक प्रक्रियाहरूमा आधारित। दुबै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरुलाई। को मा बेस मध्य पूर्व र एशिया नियोक्ता र नौकरी चाहने को लागि.
हाम्रो कम्पनी सेवाहरू प्रयोग गर्दै पाकिस्तानले मानिसलाई नयाँ जागिर प्रदान गर्दछ। बस राम्रो अनुसन्धान र भर्ती कम्पनीहरु संग जोड्छ। ती परिस्थितिहरूमा, हाम्रा सल्लाहकारहरूले आधारभूत प्रबन्धको प्रबन्ध गर्छन्। प्रत्येक पाठ्यक्रममा भिटाइमा प्रत्येक उम्मेदवार नौकरी प्रस्तावहरूको लागि फिट गर्न। एशियाको दुबई बाट एक्सटेट्सका लागि हाम्रो प्लेसमेंट सेवाहरूको अन्तिम विश्लेषण प्रभावमा। यसले हामीलाई हाम्रो ग्राहकहरू प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ दुबईमा अचम्मका कामहरू। हामीले सबै कुरा गर्‍यौं जब क्यारियर खोजीकर्ताले हाम्रो वेबसाइटमा कस्टम प्रोफाइल सिर्जना गर्दछन्। कृपया पुन: सुरू अपलोड गर्नुहोस् दुबई शहरमा बढ्दो प्रक्रिया बढिरहेको छ.
दुबई शहरमा पाकिस्तानी उम्मेद्वारहरू राख्ने
जस्तो उल्लेख गरिएको छ हामी प्रत्येक उम्मेदवारमा फिर्ती दिने छौं। कसले हामीलाई सेवाको लागि तिर्न इच्छुक र जागिर पाउँदैन। हाम्रो कम्पनी मुख्य सेवा मात्र बचतको समय हो। दुवै उम्मेदवार र क्लाइन्टहरूका लागी। तिनीहरूलाई राख्नको लागि पाकिस्तान देखि दुबई सम्म। हाम्रो विधि धेरै सरल छ किनभने पाकिस्तानबाट दुबईका कार्यकारीहरुलाई स्थानान्तरण गर्दछ। 2009 पछि यो सजिलो र धेरै अधिक व्यापक छ। मध्य पूर्वी ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु को लंबी रन समझ मा। र विदेशमा रहेका देशका उम्मेदवारहरू जसले संयुक्त अरब अमीरातमा नौकरी चाहन्छन्। यो हामी अबू धाबी मा सबै भन्दा राम्रो गर्छौं।
यी बिन्दुहरूलाई, कार्यान्वयन र चासोको क्षमताहरू मध्य पूर्वमा। हामीलाई सुनिश्चित गर्नेछु दुबई शहरमा धेरै उत्कृष्ट प्रतिभा भर्ती गर्दै कम्पनीहरु। हामी संयुक्त अरब अमीरात मा बिक्री र मार्केटिंग मार्केटिंग को भित्र काम गर्दछौं। कतर भर्ती उम्मेद्वारहरूबाट आएको आईटी कम्पनीहरुलाई सहयोग पुर्याउने। हामी पनि सऊदी अरबमा केही कम्पनीहरूसँग काम गरिरहेका छौं। लामो समयान्तरमा, हामी दुबईमा मान्छे राख्दै छौं.
पाकिस्तानका लागि संयुक्त अरब अमीरातका लागि रोजगारी - हाम्रो कम्पनीले तपाईंलाई पाकिस्तानबाट काम पाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ !. आज CV अपलोड गर्नुहोस्! दुबई व्यापार को एक शहर हो!
पाकिस्तानको लागि संयुक्त अरब अमीरातमा रोजगारहरू तपाइँ तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ!
तलको रेखा हो दुबई शहर कम्पनी पाकिस्तान बाट भर्ती। हामी अब दुबईमा विजेता कम्पनीहरु भित्र ग्राहकहरु लाई सहयोग गर्दै छौं। हामी पाकिस्तानी कम्पनीहरु संग प्रबन्धन परियोजना हो। र जहिले पनि पाकिस्तानबाट प्रतिभा खोज्दै छ। हाम्रो नयाँ उम्मेद्वारहरू सुधार हुँदैछन् क्यारियरहरू राम्रो रोजगार मार्फत मद्दत गर्दछ जस्तै व्हाट्सएप।! संयुक्त अरब अमीरातबाट कार्यान्वयनका लागि। त्यहाँ कुनै कुरा हो कि तिमी कहाँ हो।
कुनै कुरा कहाँ छैन वर्तमानमा जीवन बिताउछ। त्यहाँ धेरै छन् भारतीयको लागि रोजगारीको अवसर काम खोज्नेहरू यसबाहेक दक्षिण अफ्रिकी र अमेरिकी एक्स्पिट्सले पनि रोजगार पाउन सक्षम छन्। त्यसोभए त्यहाँ कुनै राम्रो बहाना छैन। लगभग कुनै पनि व्यक्ति दुबईमा राख्न सकिन्छ। नयाँ व्यक्ति अमीरातमा राख्न सकिन्छ, जे भए पनि तपाईंलाई बताइएको छैन। दुबई शहर कम्पनी निश्चित रूपमा युएईमा नयाँ कामदारहरू राख्न यहाँ छ। सामान्यतया बोल्दै, हाम्रा धेरै ग्राहकहरू यी भर्ती गर्ने कम्पनीहरूमा हेर्दैछन्। दुबई वेबसाइटमा क्यारियरजेट र राक्षस गल्फ कम्पनी तिनीहरू साँच्चै तपाईंको CV सँग आवेदन गर्न योग्य छन्।
पाकिस्तान क्यारियर शिकारीहरूको लागि मार्गनिर्देशन
दुबईमा पाकिस्तानी रोजगारी पाउन कठिन छ। त्यसैले पाकिस्तानी जनता हाम्रो कम्पनी प्रयोग गर्न मन पराउँछन्। दुबईमा कम्पनीहरूको मूल्य छ एशियाली कामदारहरू र भिसाको साथ कुनै समस्या छैन। हामीले सिर्जना गरेका छौं दुबई गाइड र एशियाई रोजगार शिकारीहरूको लागि जानकारी। क्यारियर खोजी गर्नेहरूले अब दुबईका लागि हाम्रा गाईडहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। युएईमा पाकिस्तानी रोजगारी हामीसँग पाउन सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, तपाईं सक्नुहुन्छ मोबाइल फोन भर्ती सेवा प्रयोग गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै नयाँ विदेशीहरू छन् जो दुबई आउँदैछन्। आवश्यक छैन रोजगार, केहि बाह्यहरु दुबई आउँछ। युएईमा रोजगारी भेटिएन। यही कारणले हाम्रो कम्पनीले दुबई गाइड र जानकारी सिर्जना गर्‍यो। क्यारियर खोजी गर्न एमिरेट्सको यात्रा गर्नु भन्दा पहिले रोजगारी पाउन मद्दत पुर्‍याउन।
त्यहाँ एउटा दुबईमा जानुहोस् र काम खोज्नुहोस् पूरा गाइड. नयाँ रोजगार खोज्नेहरू रोजगार खोज्नको लागि कडा लक्ष्य राखेका छन्। र दुबई शहर कम्पनी यहाँ छ काम खोज्ने कुनै पनि प्रवासीलाई सहयोग गर्न। हाम्रो व्हाट्सएप दुबई समूह सबैको लागि राम्रो काम गर्दछ। यो स्मार्ट तरीकाले संयुक्त अरब एमिरेट्समा राख्नु हो।
खाडी देशहरूमा नयाँ कार्य
पाकिस्तानी कर्मचारीहरूले गर्न सक्छन् रोजगारी दुबई को होटल मा एक कार्यकारी को रूप मा पनि खोज्नुहोस। त्यसोभए तपाईले एक्सप्याटको रूपमा धेरै क्षेत्रहरूमा रोजगारीका लागि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबै भन्दा राम्रो एक हो TCS रोजगार कम्पनी। अर्कोतर्फ, दुबई हाइरiring मात्र होइन, त्यहाँ अन्य थुप्रै देशहरू छन् जसले रोजगारी खोज्नेहरूको खोजी गरिरहेका छन्। त्यहाँ धेरै छन् सऊदी अरब भर्ती भर्ती नौकरी चाहनेहरू.
खाडी देशहरूमा काम गर्नुहोस् धेरै राम्रो भुक्तानी भएको छ। उदाहरण को लागी, दुबईमा अत्यधिक भुक्तानी बैंकिङ कार्यहरू। त्यहाँ न केवल खाडीमा नयाँ व्यक्तिहरूको लागि धेरै अवसरहरू छन्। साथै, युरोप र अमेरिकामा केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी दुबई सिटीबाट भर्ती गर्दै। सबैभन्दा ठूलो कम्पनी दुबईमा भर्ती गर्दै गुगल हो। निस्सन्देह धेरै अन्य अन्य देशहरु जो नयाँ रिक्तियों को लागि भर्ती गर्दै छन्।
अर्मेन्सीमा फ्रिजको रूपमा काम पाउन सबैभन्दा तेज तरिका। सामान्यतया बोल्ने छ एमबीए शिक्षा काम सुरु गर्न। वास्तवमा भन्ने हो भने राम्रो तरिका भनेको स्थानीय शिक्षा हो। सब भन्दा राम्रो दुबई वा अबु धाबी विश्वविद्यालयबाट हो। उदाहरण को लागी तपाईं दुबई मल्ल मा एक रोजगार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीहरूको लागि वास्तवमै उत्कृष्ट काम गर्दछ।
अफगानिस्तान दुबईको रूपमा सुरू गर्ने कामहरू
दुबईमा रोजगारी सुरु गर्ने सबैभन्दा स्मार्ट तरिका। सामान्यतया बोल्ने हो दुबईमा मार्केटिंग रोजगार खोज्नुहोस्। यस समय त्यहाँ धेरै छ दुबईमा दक्षिण अफ्रिकीका कर्मचारीहरु। दुबईमा रोजगारीको लागि खोजी सुरु गर्न हामी साक्षात्कारमा हिँड्न सल्लाह दिन्छौँ। अद्यावधिक पुनः सुरुको साथ जाँदैछ र भर्ती प्रबन्धकहरूसँग कुराकानी गर्न एक राम्रो विचार जस्तो लाग्छ।
उदाहरणको लागि, एक्सटेट्सले गर्न सक्छ दुबईको एक शिक्षकको रूपमा जागिर खोज्नुहोस्। यो जानकारी दिने तपाईलाई थाहा छ कि तपाईको काम खोज कसरी व्यवस्थापन गर्ने। विशेष गरी एक मध्ये उत्कृष्ट ठाउँ नौकरी खोज्नेहरूको लागि। र यो ठाउँ निश्चित रूपमा संयुक्त अरब अमीरात हो। त्यसोभए, छोटो निष्कर्षमा पाकिस्तानका लागि संयुक्त अरब अमीरातका लागि रोजगारी तपाईका लागि खुला छ। दुबई शहर मा पाकिस्तानी को लागी रोजगार। सामान्यतया, हामी छौं मध्य पूर्व बजार को लागी दुबई मा भाडामा। हाम्रो कम्पनीमा CV अपलोड गर्नुहोस् र रोजगार प्रस्तावको लागि पर्खनुहोस्।
हामी अहिले छौं दुबई मा रोजगार को लागी भर्ती!
के तपाईँ खोज्न चाहानुहुन्छ? दुबईमा काम यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ कि हामी तपाईंलाई नयाँ सुरू गर्न मद्दत गर्न सक्छौं 2018 मा संयुक्त अरब अमीरात मा क्यारियर!
दुबई शहर कम्पनी दुबईमा रोजगारीका लागि राम्रो गाईडहरू प्रदान गर्दै। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो Dubai दुबई। त्यसोभए यो कुरामा तपाईले संयुक्त अरब अमीरातमा आफ्नै भाषाको साथमा गाइडहरू, सुझावहरू र रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ।